Waxaan Dhameystirnaa Mashruuca Weyn ee Hore | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara17Waxaan Dhameystirnaa Mashruuca Weyn ee Hore
08 / 03 / 2020 17, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan maqaalka cinwaankiisu yahay "Waxaan Dhameystirnaa Mashruuca Waaweyn" waxaa lagu daabacay Maarij 2020 ee joornaalka Raillife.
Sida falsafada Isaac Newton yiri; halkii ay ka dhisi lahaayeen buundooyin, dadku keligood ayaa looga hadhaa sababta oo ah waxay dhistaan ​​darbiyada. Waxaan dhisaynaa buundooyin sababta oo ah kelinimadayadu ma oggolaaneyso cidladeena. Waxaan dib u mideyneynaa qaaradaha mar labaad.
Waxaan sii wadaynaa dhismaha 1915 Bridgeanakkale Bridge si xawaare buuxda ku socda.
Waxaan saxiixkeena hoos gaynay mid kamid ah mashaariicda ugu waa weyn dalkeena.
Buundada '1915 Çanakkale', oo ah bedel cusub oo loogu tala galay isu gudbinta 'Bosphorus Crossing', ayaa noqon doonta buundada ugu dheer ee waqtiga dheer dheemanka lagu hayo oo dhererkeedu yahay 2 mitir.
Mashruucan weyn, waxaan ku daboolay taariikhda Çanakkale tafaasiisha buundadayada. Iyaga oo matalaya 3-kii bisha 18-aad, dhererka buundadeenna waxay noqon doontaa 318 mitir.
Mashruucayaga, oo ah mid si aad ah ugu nugul deegaanka, waxaan ku fulinaa howlaheena xasaasi si aan uga hortagno waxyeelada soo gaartay baddeena.
Annagu cudur daar ma sameynno, waxaan wadnaa jidkeenna anagoo saarayna wax kasta oo aan qabanno waxaanan ku siinaynaa mid ka mid ah mashaariicda ugu yar ee adduunka adeeggaaga.
Annaguna waan dhammeyneynaa mashruucu. Iyo muddo dheer kahor taariikhda heshiiska ...
Waan ku faraxsanahay maxaa yeelay waxaan u shaqeynaa shacabka, waxaan quudinaa shacabka.
In kasta oo aan u adeegno dadkeenna, Mehmet maintai wuxuu ilaaliyaa xasilloonida dhul ahaaneed iyo amniga xadka ee waddankeenna Idlib. Waxay qaadaysaa dhamaan tilaabooyinka lagama maarmaanka ah ee Liibiya ee Idlib si loo jebiyo gacmaha loogaga soo horjeedo sharafta dalkeeda. Nasiib darrose, dhammaadkii bishii hore, 33 geesiyaal ah Mehmet Mehmet ayaa shahiiday natiijada weerarka hoose ee ciidamada taliska ee Idlib, Syria. Waxaan u rajaynayaa naxariis Eebbe inuu uyahay kuwa shahiiday, caafimaad degdeg ahna u siiyo kuwa dhaawacmay. Waa in aan la iloobin in, iyada oo la kaashanayo umaddeena, xubnahan khiyaanooyinka ah la siin doono jawaabta lagama maarmaanka ah.
Salaadda aan la leenahay Mehmetciks…
Inkasta oo adduunku uu la halgamayo dhibaatada, waxaan hirgelineynaa mashruuca weyn
Wasiir Yildirim: Waxaannu bilawnay mashruuc 9 ah oo ku yaal İzmir bishii 11
Binali Yıldırım: Waxaan dhisi doonaa mashruuca 2013 ee 3!
Bülent Arınç wuxuu ku dhawaaqay mashruuca 100 ee Bursan's 100
Wasiirka ayaa sheegay in aanan u sheegin dadkeenna mashruuc kasta oo aanan u keeni karin nolosha
3. waxay qeexaysaa Mashruuca Crazy ee garoonka diyaaradaha
Canalioğlu 61 waxay xusuusisay mashruuca
Sirkeci Gaadiidka (Video)
Yaxya Kaptan wuxuu nala wadaagay mashruuca loogu magac daray Yok No Platform Hep
"Tii Tii Ugu Danbeysay Ee Dalkayga Hooyo Iyadoo Aan Waxba la Jabin"